सिराहा, २५ कार्तिक । धनगढीमाई नगरपालिका–१० धनगढी बजारस्थित सडकमा ना.५३ प ३५९९ नम्बरको मोटरसाइकलले आइतबार बिहान ठक्कर दिँदा एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।
महिलालाई कुटपिट गर्ने तीन पक्राउ
रुपन्देही, २५ कार्तिक । महिलालाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गर्ने एकै परिवारका तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
धनुषा, २५ कार्तिक । एक महिलामाथि बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट गरिएको छ ।
उदयपुरमा ट्यााक्टर दुर्घटनामा तीनको मृत्यु
उदयपुर, २५ कार्तिक । वनभोज खाएर फर्किएका यात्रु सवार एक ट्र्याक्टर आइतबार साँझ दुर्घटना हुँदा तीनजनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ भने ३४ घाइते भएका छन् ।
भीमदत्तनगर, २५ कार्तिक । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीका १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आइतबारदेखि उनका बुबा र आमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् ।
पिकअपको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु
झापा, २५ कार्तिक । झापाको कनकाई नगरपालिका–१ स्थित दुर्गापुरमा आइतबार बिहान सडक दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।
छठ पर्वको नहाय खाय विधि गरियो
जनकपुरधाम, २५ कार्तिक । आस्थाको महापर्व छठअन्तर्गत आज पहिलो दिन नहाय–खाय विधि गरिँदैछ । चार दिनसम्म मनाइने छठ पर्वअन्तर्गत पहिलो दिनमा नहाय–खाय विधि गरिन्छ ।
लहान, २५ कार्तिक । फोहर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङसाइट नहुँदा सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाको बजार क्षेत्रबाट सङ्कलित फोहरमैला नजिकैको खोलामा फ्याँकिदै आएको छ ।
परासी, २५ कार्तिक । पश्चिम नवलपरासीको विकट पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा सञ्चार सेवाको सहज पहुँचमा पुगेका छन् । पश्चिम नवलपरासी तराई भए पनि यहाँ विकट पहाडी क्षेत्र पनि छ ।
काठमाडौं–जनकपुरधाम पर्यटकीय बस सञ्चालन
काठमाडौं, २५ कार्तिक । दीपज्योती टुर्स एण्ड ट्राभल प्रालिले पहिलोपटक काठमाडौँबाट पर्यटकीय गन्तव्य जनकपुरसम्म पुग्नका लागि पर्यटकीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
इनरुवा, २५ कार्तिक । छठ पर्व शुरु भएसँगै सुनसरीका मरिक समुदायलाई अहिले बासको सामग्री बनाउनका लागि भ्याइनभ्याइ छ ।
जलेश्वर क्षेत्रका तीन जना स्वच्छता अभियानी सम्मानित
महोत्तरी, २५ कार्तिक । सेभ जलेश्वरमार्फत स्वच्छता महाअभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाएको कदर गर्दै सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरधामले जलेश्वर क्षेत्रका अभियानी एवं पत्रकार राकेश प्रसाद चौधरीसहित तीन जनालाई सम्मान गरेको छ ।
विकास कार्यमा आवश्यक सहयोगका लागि प्रदेश सरकार तत्पर : प्रदेश प्रमुख
जनकपुरधाम, २४ कार्तिक । प्रदेश सरकारलाई अघि बढ्न तथा नीति नियममा आवश्यक परिमार्जनका लागि धनुषा चेम्बर अफ कमर्सलाई सुझाब दिन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले बताएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले सांस्कृतिक महोत्सव गर्ने
विराटनगर, २४ कार्तिक । प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले छठ पर्वको अवसरमा सबै पर्वको सांस्कृतिक महोत्सव झल्किने गरी छठ महोत्सवको आयोजना गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं, २४ कार्तिक । महापर्व छठ आज क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय पर्व भइसकेको छ ।
हिन्दू परिषद्ले प्रदेश स्तरीय भेला गर्ने
वीरगंज, २४ कार्तिक । हिन्दू परिषद् नेपाल प्रदेश २ को बैठक वीरगंजस्थित गोपाल मण्डलीमा सम्पन्न भएको छ ।
चितवन, २४ कार्तिक । पूर्वी चितवनको राप्तीमा भएको छुट्टाछुट्टै घटनामा परेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ भने सवारी ठक्करबाट अर्को एकजनाको मृत्यु भएको हो ।
ट्याक्सी र बोलेरो ठोक्किँदा तीनको मृत्यु
बारा, २४ कार्तिक । निजगढ नगरपालिका–९ भमरापुलस्थित पुर्वपश्चिम राजमार्गमा ट्याक्सी र बोलेरो ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
सांस्कृतिक कार्यक्रममा गर्ने प्रतिस्पर्धा
इनरुवा, २३ कार्तिक । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा चाडपर्वका अवसरमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारलाई बोलाएर सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
बुटवल, २३ कार्तिक । नेपालमै पहिलो पटक हुन लागेको त्रिपिटक वाचन कार्यक्रमका लागि लुम्बिनी क्षेत्र सिँगार्न थालिएको छ ।
नमूना बन्दै दलित बस्ती
लहान, २३ कार्तिक । केही वर्षअघिसम्म समस्यै समस्यामा थलिएको सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–९ को दलित बस्ती अहिले भने नमूना बनेको छ ।
बाँके, २३ कार्तिक । अब्दुल वाहिद मन्सुरी ‘चुन्ना’ मुस्लिम समुदायका व्यक्ति हुन् । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका चुन्ना मुस्लिम भए पनि हिन्दूका हरेक चाडबाडमा रमाउने गर्छन् ।
आठ वर्षमा पनि बनेन शीत भण्डारगृह
बनियानी, २३ कार्तिक । झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा निर्माणाधीन शीत भण्डारगृहको निर्माण कार्य आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन ।
भैया दुईज पर्व सम्पन्न
बाँके, २३ कार्तिक । पश्चिम नेपालका मधेशी समुदायमा तिहारको अन्तिम दिन यम द्वितीय अर्थात् भैया दुईजमा भुर्की पुजन गरी आ–आफ्नो दाजुभाइलाई टीका लगाई चिउरा, भुर्की र मिठाई खुवाएका छन् ।
सहचालक मृत फेला
धनगढी, २३ कार्तिक । धनगढी उपमहानगरपालिका—४ स्थित बस बिसौनी परिसरमा ना४ख ४२६४ नं. को बसका सहचालक मोहन बोहरा मृत भेटिएका छन् ।